HAALA YEROO AMMAA KANA UUMMANNI OROMOO KEESSA JIRU..
Namootni tokko tokko dammaqiinsaa fi hubannaa gad fagaate dhabuu irraa kan ka’e dhiphuu fi jireenyi salphinaa kan saba Oromoo itti dhufe waggaa digdamii shanii as qofa itti fakkaata. Keessatti dhaloota qubee warri jennu kun dhalatanii kan dhidhiitamaa fi tumamaa guddatan Mootummaa TPLF jalatti waan ta’eef Mootummaa TPLF wajjin diddaan qaban kan hiikamuu fi araaraamuu danda’u miti. Karaa biraa diddaan sabni isaanii Mootumaa Impayeera Itoopiyaa wajjin waggaa dhibaa fi shantumaa ol qabu kan hiikamuu fi araaraamuu danda’u akka hin taane isaan hubachiisuun dirqama warra beeknu akka ta’e hubachuu qabna.
Bara Mootummaan Habshaa tokko kufuuf ka’u akkaataa itti mootummaa haaraa Impayeera Itoophiyaa tiksu haaroomu irratti namootni qaamaan Oromoo tahan gahaa guddaa qabachuu isaanii seenaatu ragaa baha. Har’a illee dhiiga ilmaan Oromoo akka bishaanii dhangalaasaa uummatni bal’aan Oromoo bilisa bahuuf dararamaa jiru irra tarkaanfatanii bu’aa lubbuu isaaniif argachuuf uummata Oromoo hidhaa Impayeera Itoopiyaa jalatti hambisuuf wixxifachaa jiran arguun kan nama ajaa’ibu miti. Kan nama ajaa’ibuu qabu uummatni Oromoo akkas dammaqee, mirga isaa fi dhima isaa hubatee ka’e yoo ayyaan-ilaallatota kanaaf gowwome mana hidhaa Impaayeera Itoophiyaa jalatti hafe dha. Gaafi sana hadheessamuu qabu Uummtni Oromoo humna TPLF cabsuu yoo qabaate harcaatuu Mootummaa Habshaa fi gantuu saba Oromoo cabsee abbaa biyyumaa isaa mirkaneefachuuf dirqama sabummaa qaba. Galami qabsoo godhamaa jiru sadarkaa ol’aanatti abbaa biyyumaa irratti xiyyeefachuu irraa eegama.
Mee gara mataa duree koon deebi’a. Impayeerri Itoopiyaa uummata bal’aa Oromoof akkuma mana hidhaa Qilnixoo ti. Uummatni Oromoo mirga isaa sarbamee , seeraa fi heera malee, saamamaa, ajjeefamaa, dhiitamaa akka gad aantuutti ilaalamaa waggaa dhibaa fi shantamaa ol fedhii isa ala mana hidhaa kana keessa jiraate Har’a immoo ibidaannis gubbachaa jiraachaa jira. Garatti keessaa baqatee bahuu hin qabu. Mootonni Habashaa yoo darbiin itti wal furan iyyuu kaayyoon isaanii tokkicha. Yoo danda’an sanyii uummata Oromoo lafa irraa duguganii balleessuu dha. Yoo dadhaban immoo akka mana hidhaa kana keessaa hin bane cancala itti jabeessanii maruu. Mana hidhaa Impayeera Itoopiyaa keessa uummata Oromoo maratu jirata. Baayyina isaa kana irraa kan ka’e guyyaa guyyaan suuta suuta gubatus, ajjeefamus, biyyaa ari’atamus irraa hafee as gaheera.
Mana hidhaa Qilnxoo ilmaan Oromoo haqa saba isaanii ni dhaabbatu jedhee diinni hubatu funaamanii bakka itti ukkamamanii keessaa tokko. Mirga fi haqa akka ilma namaatti qaban diinni kun isaan irraa sarbee jira. Irbaata gahaa fi nagaa dowwachuudhaan akka fayyaa isaanii dhibamu godha. Mana hidhaa keessatti geergoon, hinjiraanii fi tafkiin wal horee akka hirriba isaan dhorkuu fi akka dhukkuba adda addaan dhuman isaan gochaa jira. Kunuu xinnaatee yaroo barbaaduu tokko tokkoon gad fudhee waxala. Namootni yartuun ilmaan saba isaanii biratti kabajaa guddaa qaban reebichaan salphisu. Yaroo itti ilmi nama du’a hawwatu keessa akka jiran wal nama hin gaafachiisu.
Mootummaan TPLF mana hidhaa gubuu akka meeshaa waraanaa itti dhima bahaa jira. Akka namonin dhima mootummaa kana keessa isaa beekaan jedhanitti waan lamaaf. Inni duraa namoota hidhaa keessa jiran yaroo seeraa fi heera malee ajjeessuu barbaadan mana hidhaatti ibida ka’u. Yookan ibodatu ajjeessa yoo ibida baqatanii bahan immoo rasaasan akka’u. Kana waan biyyi lafaa ijaan argeef waan ragaa nama barbaachisu hin qabu. Inni lamaffaa mana hidhaa gubachuu sababa gochuudhaan namoota barbaadan ajjeessanii yaroo maatiin dubbisuu dhufuu bakka biraatti jijjiramanii jiru jedhu. Bakka itti jijjiraman immoo maatiin gaaffachuu mirga hin qabu.Isaanis hin himaniif. Maatiin mana hidhaa irra deemanii yaroo dadhaban ni dhiisu. Maatiin jaalallee isaaf boo’ee illee garaa kutachuu iyyuu hin danda’u.
Waan baayyee sammuun keenya fudhachuu dadhabe hammeenya Mootummaan TPLF uummata Oromoo irratti hojjetaa jiru miti. Yaroo hundaa mootummaan uummata humnaan bushu, uummata doorsisuuf ni yaala. Garuu warri hammeenya kana fakkaatu hojjetan dhugaan dhala namaa irraa dhalatan moo dhagaa gammoojii Tigray keessaa bahaan? Haadhaa fi Abbaa ni qabuu? Obboleessaa fi Obboleettii ni qabuu? Kun yoo hafe namuma jaallatanii fi isaan jalatan jiraa? Utuu kan isaanii akkasi jalaa ajjeefamanii gaddi isaanitti dhagaamaa laataa? Warri kun waan dhala namaa irraa dhalatan tasa hin fakkatan. Warra kana maalummaa isaanii himuun nama rakkisa. Warri kun bineesa irraa iyyuu achi fagoo jiru. Waan warri kun gochaa jiran dhaga’uu fi arguun nama suukkaneessa. Mootummaan hunduu ni darba, kan hin dabarree seenaa fi uummata. Mootummaan Hitlerii fi Mosolonii biyya lafaa bituuf humna qabna jedhanii warra yaadanii iyyuu kufeera. Mootummaa TPLF kadhaa fi sobaan guyyaa dheereffatu mitii. Garuu seenaa maal fakkaatu uummata keessaa dhalataniif dabarsanii darbuu barbaaduu?
Gubanii fi ajjeessanii akka kan lubbuun jiru illee hin waldhaanamne gochuu fi reeffa maatii dhowwachuun waan tokko biyya lafaa irratti argamees, tahees hin beekne dha. Ilmaan Ormoo warra har’a nuyi maqaa isaanii illee hin beekne mana hidhaa kana keessatti wareegaman, kan guyaa guyyaan karaa irratti fi daggala keessatti ajjeefaman gootota keenya. Xinnaa fi guddaa Oromoo bilisummaa saba isaaf wareegaman seenaan saba Oromoo boqqonna duraa irra isaan kewwata. Yaroo baayyee goonti Oromoo yaadatamanii fi farfaman erga wareegamanii booda. Seenaan qabsoo uummataa gootota haaraa takkaa hin yaadamne ni uummata. Fayisaa Lellisaa figitii maraatonii irratti itti dadhabee, itti dafqee yeroo injifannaa fi badhaasa dhunfaa isaa argachuu qaqqabe saba isaaf dabarsee kenne. Lubbuu isaa dabarsee kennuu irraa adda miti.
Yaroo gabaabduu sana keessatti biyyi lafaa uummatni Oromoo eenyu akka tahe maqaa isaaf adda baasee hubate. Qabsoo ummata Oromoof illee fira hedduu hore.Ummtni isaas bakka jiru maraa kabajaa fi galata guddaan isa simata. Maqaa Fayisaan durbi ni weedifti goonni ni geerara. Artistonni Oromoos yaroo gabaabaa kana keessatti sirba gootummaa isaaf baasaniif jiru. Kan saba Oromoof of keennee wajjin dhaabbate akkas faarsamuu qaba. Kan lammii isaa ganee diinaaf dabarsee kenne immoo abaramuun karaa dha. Biyya ala kana keeassatti waan deemaa jiru fedhii numummaa irratti hirkatee deema malee kan fedhii sabummaa irratti hirkatee deemu baayyee xiqqaa👈 dha. Namni biyya irraa ala bahu dafee haala kana hubachuu hin danda’u. Waan akka gaarerraa nama hundaa fakkatanii socho’anii yaada deemanii hubachuun ni jabaata. Fayisaa illee gatii isaa sukkumaa gara Itoopiyumaa sanatti warra dhiibuu yaalan ni agarra.Fayyisaan illee nama dammaqaa waan taheef seenaa saba isaaf tolche kana haree kosiitti hin gatu.
Har’a tokko tokkoon qabsaawwan Oromoo warri ofiin jedhan essa akka dhaaban murteefachuu qaban. Ummanti Oromoo Mootummaa TPLF kana humnaan of irraa gate malee hammeenyi tokko dhaga’amee fi argamee hinbeekne irratti raawwachuuf akka deemtu hubachuu qabna. Qabsawan Oromoo dhaabbii hin qabne yaroo Mootummaan Habshaa jiguuf ka’u utubuu tahuuf warri hiriira galan TPLF irraa adda bahanii ilaalamuu hin qaban. Ummatni Oromoo warra abba biyyummaa isaa fi isa gidduu dhufan barbadeessuu malee filmaata biraa hin qabu. Galatni ABO kaayyoo bilisuumma saba Oromoo qaqqbsiisuu fi fudhachiisu. Uummatni Oromoo kayyoo bilisummaa kana fudhatee Kaabaa hamma Kibbaa , Bahaa hamma Dhihaa ka’ee jira. Kana booda hojiin ABO fi Qeerroo Bilisummaa Oromoo qabsoo sabni Oromoo oofaa jiru qindeessuu, hooggannuu fi galma isaa akka gahuuf tooftaa fi tarsiimoo barbaachisuu haala yaroo wajjin diriirsuu dha.
.Biyya ala keessatti harcaatonni nafxanyaa biyyaa Itoopiyaa boontuu, afaan tokko, aadaa tokko fi alaaba tokko qabduu owwalaa TPLF irratti ijaara jedhanii ayyaan ilaalatoota Oromoo tokko tokko ofitti qabanii mootummaa cee’umsaa ijaarra jedhanii wixxifachaa jiru. Yaroo haala kana argan namootni Oromoo tokko tokkoo gaaffii adda addaa kaasu. Gaaffii isaanii kana keessa : Gaaffiin Uummata Oromoo maal? Hegereen uummata Oromoo maal taha? Abbaan qabsoo kanaa eenyu? Gaaffillee kana namnuu akkuma fedhii isaa fi hawwii isaatti deebifachuu yaaluun ni mala. Haa tahu malee dhugaa jiru dhoksuun hin danda’amu.
Dubbiin nama yaadeesssu madda dhugaa qabu irraa akka dhufaa jiru nuuf gala. Yaroo Impaayeeri Itoopiyaa jiguuf ka’uu kan dura utubuuf dhiyaatu namoota Oromoo ti. Warri kun uummata Oromoof jedhanii utuu hin taane fedhii mataa isaaniif jedhanii warra lammii isaanii guyyaa walakkaa gabaa baasanii gurguratan. Yoo har’as warri kun hin jiran jenne dhugaan fagaachuu taha. Bareechanii jiru. Har’aan kana haala darban irraa maaltu adda godha yoo jenne dammaqinsaa fi murannoo uummatni oHi Qabsososooo bilisummaaf dha.
Gaaffiin Ummata Oromoo abbaa biyyummaa akka tahe karaa dogongora hin qabne ifa godhee jira. Abbaan qabsoo kanaas Uummata Oromoo ti. ABO illee kan kaayyoo Bilisummaa kana uummata Oromoo fudhachiise irraa molqachuu hin danda’u. Kun dubbii dhume waan taheef keessa deebi’aanii akka madaa jaldeessaa xuxxuqaniin jijjirama hin fidu. Ummatni Oromoo abbaa biyyummaa isaa erga mirkanneefate sabootaa fi sab-lammii naannoo isaa jiran wajjin nagaa jiraachuu irratti hojjechuun barbaachisaa dha. Har’as diina waloo kana waliin dhabamsuu irratti hojii qabsoo bareedaa deemsisaa jira.
Author AbdisaPosted on October 27, 2016 November 18, 2017 Leave a comment on HAALA YEROO AMMAA KANA UUMMANNI OROMOO KEESSA JIRU..
Author AbdisaPosted on August 30, 2019 Leave a comment on Ibsa Ejjannoo Miseensota Konyaa ABO Victoria – Australia
O D A A
Kan arganne Barruu Dr.Gammachuu Magarsaa irraati.
Bakka Oromoon jiru huna Odaan jira. Baadiyaatti odaan gaaddisa looniifi bakka araaraafi jaarsummaan itti gaggeeffamudha.
Uumamsaa galma waan fakkaatuuf bakka seera itti tumatanii fi yaa’iin firaallee itti ba’aniidha. Akkasumas Oromiyaa keessatti hasxaafi faajjiin, alaabaa fi chaappaan Odaa qabu. Faayaan mormaafi harkaa akkasumas uffati aadaa Odaan miidhagu.
Waanuma odaan jiruufi jireenya hawaasa oromoo keessatti bakka guddaa qabuuf ture, baatii muraasaan dura Odoon godina Gujiitti waggaa sadii dura jige ture ka’ee dhaabbachuun lalisu eegaluunsaa oduu guddaa ta’ee kan tureef.
Jaarsoliin/maanguddoon haalaa kana bara milkii ta’u mul’isa jechuu walitti hidhama aadaa waliin qabu ibsuun.
Odaa fakkeenya muka milkiidha
Oromoon Odaa jaallata, bakka guddaas kennaaf. Callisee mukummaa isaatiif osoo hin taane mallattoo inni bakka bu’un, achii-dhuftee aadaafi seenaa Oromoo keessatti qabu guddaadha jedhu qorattoonni seenaa.
Odaan Oromoo biratti yoomirraa jalqabee akka faayidaarra oole qorannoon barreeffamee sirriitti ifa ta’ee dhalootatti darbe hin jiru.
Looret Tsagaayee G/Medihiin garuu waa’ee irreechaafi Odaa barruu Gadaa irratti waggoota hedduun dura akka barreessanitti, ka’umsi Odaa Kushirraa naannoo bara 8,000 Dhaloota Kiristoosiin Dura akka jalqabedha.
‘Odaan muka osoo hin taane yaadadha…’
Ayyuun Aadaafi Seenaa dhimma kanarratti dubbifne keessaa tokko Dr. Gammachuu Magarsaati. ”Odaan muka osoo hin taane yaadadha (concept),” jedhu Dr. Gammachuu.
Akka ayyuun kun jedhanitti, bineensis namnis Odaa qabaa. Akkamus muknis Odaa qaba. Kanaaf jedhan, Odaan yaada malee muka qofaa miti kan jedhamuuf. ”Aadaa Oromoo hunda bakka bu’a Odaan” jedhu.
Oromoonis aadaadhumaan Odaan ‘Muka abbaa keenyaa jedha’. ”Egaa waan hunda akka mallattootti kan mul’isuu ammoo mukicha Odaati,” jedhu.
”Bineensa keessaa leenci, simbira keessaa ammoo risaatii Odaadha. Keessumaa guutuun risaan akka Odaatti ilaalama. Nama keessaammoo qaalluun Odaadha. Garuu qaalluu yeroo jennu warra fagdu jechuu miti, jedhu Dr Gammachuun.
Dirribii Damisee Bokkuu Pirezidaantii Waldaa Maccaafi Tuulamaafi Barreessaa Ilaalchaafi Seenaa Oromooti. Isaanis, Odaan akka mukaatti mukuma garuu akka dhugeeffannaa waaqeffannaatti muka ayyaana milkii qabeessadha jechuun ibsu.
Odaan gaaddisa, hin gogus. Lafarra ballatee dagaaga malee. Yeroo ongeen hammaatee gammoojjii keessaa mukni marti gogu Odaan achumatti hafa.
Odaan osoo bokkaan hinroobiin turellee, bishaan malee waggaa lamaa hanga sadiitti turuu danda’a jedhu, Obbo Dirribiin.
Odaan ofumaan galma ta’a
Odaan irra keessa ballatee, lafarra dagaagee deebiyee karaa biraa lafatti gadi dhufa. Kana jechuun, ofumaan mana ta’a, ofumaan galma ta’a jechuudha jedhu.
Akka ayyuun aadaafi seenaa kun jedhanitti, Odaa jalatti aduun nama hingubuu, sagaleen illeen nama hin jeequ. Warri Odaa jalatti mari’atanis sagaleen isaanii alatti hinba’u. Kanaaf, odaan galma aadaa ayyaana qabu kan jedhamuuf jedhu.
Akkasumas “Odaan bakka araaraati. Odaa jala taa’anii gosaafi araari kan taasifamu. Achi jala teesse yoo Waaqa kadhatte siif dhaga’a, ni milkoofta. Seerri achi jala tessee tumattee hojiirra siif oola,” jedhu Obbo Dirribiin.
Dhimma muka Odaa adda taasisuu keessaa tokko Odaa bakakaan hin dha’u. Kana malees, bineensonni kan akka bofaafi jawwee itti hingalan. Odaatti waantoonni nama rifachiisan hingalan waan ta’eef achi jala bilisaan taa’amee aara galfachuufi araara raawwachuun ni danda’ama, jedhu Obbo Dirribiin.
Walumaagalatti, Oromoon Odaa akka mallattoo araaraa, mallattoo nagaattifi milkiitti ilaala. Kanaafu Odaa jala waraanni hin qubatu jedhu ayyuun kun. Odaa jalatti waanti hamaan hin hojjetamu; Odaa jalatti adabbii du’aa hin dabarfamu, hin raawwatamu.
Odaa meeqatu jiru?
Odaa meeqatu jira gaaffii jedhuufis, Odaan miliyoonatu jira jedhan Obbo Dirribiin. Odaan kan Oromoon beekamtii kenneef qofatu lakkaa’ama malee hedduutu jira. Fakkeenyaaf, Tuulama keessa Odaa Nabee jira; Arsii keessa Odaa Roobaatu jira; Odaa Bultum Harar keessa jira; Odaan Bisili Macca ira; Odaa Gaarrees Boorana jira; Odaa Mokodii ykn Odaa Gaarradoo ammoo Wallootti argama.
Isaan kun kan beekamtii argataniidha malee Jimma, Wallaggga, Shawaa keessa Odaan jira jedhu, oggeessi kun. Odaa Oromoon jalatti walga’ufi wal araarsu shaniifi ja’a qofa miti. Kun dogogora guddaadhas jedhu.
Oromoon Odaa hinmuru, ni safeeffata. Horiin jala dheeda, namni ammoo jala facaafate
Author AbdisaPosted on May 30, 2018 Leave a comment on O D A A
human rights councilSecretary of state Mike PompeoPresident of the European Commission Mr. Jean Claude Juncker
Oromo people and Qeerroo are demanding freedom while government (TPLF) responding with tank (mass shooting from the ground) and air force (shootout from the sky).Oromo people and Qeerroo promote peace and security while government (TPLF) promote hate rate, terror and destruction: targeted shootout on the street, imprisoning and torturing (video evidence is available)Oromo people and Qeerroo are crying for equality and prosperity while government (TPLF) is answering with Displacement and Massacre in refugee camps, schools, restaurant and living room.Oromo people and Qeerroo are looking for solution while government (TPLF) is creating and manufacturing conflicts (millions of Oromo’s were internally displaced in eastern and southern Oromia because of fabricated conflict of TPLF between two brotherly nations Oromo and Somalia).Oromo people and Qeerroo are plighting for universality while government (TPLF) is insisting and protecting the apartheid system.Oromo people and Qeerroo are demanding transparency and honesty while government (TPLF) is promoting insecurity among families and entire nations by ‘one-in-five’ policy (referred to an intrusive policy of surveillance based on intelligence gathered from informers in one out of every five households).
The ‘global war on terror’ and location of the Ethiopian empire at the heart of a ‘regional conflict complex’ leads to convince the western power to fully support the TPLF under cover name Ethiopian government in order to keep political power and state security organizations centralized and under control. Mostly US resources have become available to countries in the region in the form of diplomatic support and funding. This has generally resulted in the regression of civil liberties and prioritized security concerns over quality-of-governance concerns. The second effect is that, that countries in the region, Ethiopia included, have been enabled to brand as ‘terrorists’ groups that have domestic grievances. This branding has happened mainly through associating such groups with the transnationalism, radicalism and extreme violence of Al-Qaeda’s jihad, which was the central theme of the war on terror. Examples in the case of Ethiopia include the suppression of the Oromo Liberation Front and which has played a role in cutting off alternative conflict-resolution channels such as peace talks.Misleading the international community by calling his military the vehicle of development. TPLF definition: The military are vehicle for development (The main vehicle through which military involvement in the economy takes shape is the Ethiopian Metals & Engineering Corporation (METEC), a parastatal business conglomerate run by the military. Don’t be fooled by TPLF cheap propaganda. TPLF military are killer, butchers and moral less, at this moment they are massacring and genocide is going on across Oromia and in entire Ethiopian empire from east to west from north to south.
Support the Oromo people/qeerroo revolution to end the state terrorism and keeping regional and international security intact. Supporting Oromo people/qeerroo revolution is a win-win investment (safe, solid and tax money remain at home out of TPLF corrupted leaders).Support the Oromo people/qeerroo revolution to bring lasting peace and democracy and rule of law in Ethiopian empire.Support the Oromo people/qeerroo revolution to stop the ongoing massacre of the innocent civilians across the Ethiopian empire.Deny the TPLF leaders the safe heaven and assist us in order to bring them to the international criminal court (ICC).Stop to oxygenate the critically ill TPLF by investing peoples tax money to safe vegetative TPLF. At this moment investing in TPLF to oxygenate thorough Extracorporeal membrane oxygenation (ECMO) is very expensive and no financial insurance. Normally for one government the basic insurance is his own people, the Oromo people and entire nations of the Ethiopian empire are already dismantle the respiratory and circulatory function of TPLF. So, invest your money, energy and time on Oromo people/qeerroo revolution to get back more.
Author AbdisaPosted on March 19, 2018 Leave a comment on Western tax money has to be a free oxygen for Oromo people revolution instead of expensive ECMO for dying TPLF state terrorism.
Pireezidantoonni duraanii Itoophiyaa lamaan maaliitti jiru? Dr. Nagaasoo Gidaadaa Pireezidantii Mootummaa Riippabliika Federaalaa Diimookraatawaa Itoophiyaa jalqabaa ta’uun A.L.I bara 1987 gara aangootti dhufan. Har’a faayidaan akka Pireezidantii duraaniitti argatan tokko akka hin jirreefii mana keessa jiraatan keessaa akka bahaniif xalayaan itti barreeffamuu dubbatu. Obbo Girmaa Waldagiyoorgis ammoo pireezidantii isa lammataa yoo ta’an marsaalee lamaaf dursaa biyyaa Itoophiyaa ta’aniiru. Obbo Girmaan faayidaa pireezidantii duraaniif malu seerri ajaju hunda argachaan jira jedhu. Dr. Nagaasoo Gidaadaan bara 1987 – 1994 pirezidaantii turan Obbo Girmaa W/Goorgis bara 1994 – 2006 marsaa lamaaf dursaa sabaa ta’an Garaagarummaa kana maaltu fide?
“Kunis ta’e jedhamee akkan ani siyaasa keessatti qooda hin fudhanneef guyyaan ani aangoo gadi dhiise kan itti dabalame dha,” jedhu.
Aangoo gadi dhiisanii waggoota afur booda mana mareef dhunfaan dorgomuun dura qondaaltota bordii filannoo gaafatanii, dhunfaan dorgomuun faayidaa isaanii akka isaan hin dhabsiifne mirkaneeffachuu isaanii BBCtti himanii jiru.
Jireenya pirezidaantummaa boodaan Dr. Nagaasoon gammadaa miti
Obbo Girmaan jireenya aangoo boodaan hedduu hojjatan
Seerri pirezidaantii duraa siyaasa biraatti akka hin galle dhorku Dr. Nagaasoo miidheera
Obbo Girmaa W/Goorgis aangoo booda hojii guddaa akka hojjetan yaada qabu
Obbo Girmaa W/Goorgis pirezidaantii ta’uun dura bara H/Sillaasee eegale biyya tajaajilaa turan
By Raabbiirra Abdiin Qaba
Author AbdisaPosted on November 18, 2017 November 18, 2017 Leave a comment on Pireezidantoonni duraanii Itoophiyaa lamaan maaliitti jiru? Dr. Nagaasoo Gidaadaa Pireezidantii Mootummaa Riippabliika Federaalaa Diimookraatawaa Itoophiyaa jalqabaa ta’uun A.L.I bara 1987 gara aangootti dhufan. Har’a faayidaan akka Pireezidantii duraaniitti argatan tokko akka hin jirreefii mana keessa jiraatan keessaa akka bahaniif xalayaan itti barreeffamuu dubbatu. Obbo Girmaa Waldagiyoorgis ammoo pireezidantii isa lammataa yoo ta’an marsaalee lamaaf dursaa biyyaa Itoophiyaa ta’aniiru. Obbo Girmaan faayidaa pireezidantii duraaniif malu seerri ajaju hunda argachaan jira jedhu. Dr. Nagaasoo Gidaadaan bara 1987 – 1994 pirezidaantii turan Obbo Girmaa W/Goorgis bara 1994 – 2006 marsaa lamaaf dursaa sabaa ta’an Garaagarummaa kana maaltu fide?
Bilisummaan saba tokkoo mirkanaa’uuf aarsaawwaan gurguddaa kaffaluun dirqama qabsoon namatti laatudha. Aarsaan qabsoo keessatti baafamu aarsaa tolaa akka hintaaneef qabsaa’oonni daandii haqaa qabatanii uummaata isaanii walaboomsuuf carraaqaan haxxummaa diinaa irratti baruun wal hubachiisaa adeemuun barbaachiisa. Uummanni Oromoon kaleessa du’aa ture, reebamaa hidhamaa ture. Har’as sanumaaf. Ta’us ajjeechaan, hidhaan kamuu duubdeebii qabsoo utuu hintaane uummaata banbansee qabsoo fuulduratti dhiibaa jira. Qabsoon akka nama Qurxummii waadee nyaatuu eeggannoo gaafata. Namni Qurxummii nyaatu eeggataa, haanxaa ykn lafee ishee keessaa ilaalaa nyaachuu baannan, laagaa waraanuun hinhafu. Laagaa waranamtee, kokkeetti haanxaan Qurxummii si qabattee jiraachuun waa danda’amaaree? Namni qabsoo gaggeessuus diina gidduu akka jiraataa jiru dagaggamaaf agachu hinqabu. Isaaniin mil’ataa adeemuun jireenya lubbuusaa cinatti jireenya qabsoo egereef murteessaadha. Haala keessa jiru daawaachaa adeemuun kallattii bahaaf galmaa isaaf karaa saaqa. Karaa Itti jirru karaa boochoo karaa asphaaltii nutti fakkaatuu hinqabu. Bu’aa ba’ii, karaa diilloo ayyaan ilaallattootaaf diilloon halagaa irra guute; karaa gufuuf gufata baay’atu irra adeemaa jirra. Sanaaf karaa qulqulleessuun daandii Bilisummaa uummaataaf baafame sana haalaan bareechaa adeemuun barbaachisaadha.
Author AbdisaPosted on November 9, 2017 Leave a comment on Haala Sochii Uummata Oromoo Oromiyaa Ammaaf Sochii Qeerroo Bilisummaa Oromoof Adeemsa Harcaatoota Wayyaanee.
Fincila Xumura Garbummaa Eenyuun Qopheesse kan Jedhuufi Akeekni qabsoo kana maalii?
By Raabbiirraa on October 17, 2017 |
“Mormiin Oromiyaa keessatti yeroodha gara yerootti adeemsiffama turuun isaa beekamadha. Mormii kana immoo baayee isaa kan ogaanuu Qeerroofi ummata oromoo ta’u isaa wal nama hin gaaffachisu. Haa tahuu malee biyyoota Diyaaspoora keessa naatu Fininsaa jiraa, naatu oganaa jira kan jedhuus midiyaa hawaasa irraatti adeemsiffama ture. Kanaas haa ta’u saanas kaayyoon gaggeeffama jiru gaaffii ilmaan oromoo yeroo dheeraaf irratti warregamaanifi warregama jiraan akkasumaas mirga hiree murteeffanafi bilisummaa gonfachuudha. Kana keessatti Bu’uraa qabsoo kan ta’e ABO ga’e gudda akka qabu beekuufi kaayyoo wareegamtoota ilmaan Oromoo dagachuun qabnu. Waggoota dheeraaf dhimma Oromoof Oromiyaa irratti hubannoo gadii fageenya uummata oromoof, Qeeroo Oromoof, beektoota oromoo Diyaaspoora jiraanif kennuun akka garbumma diddaan gochu irratti ciccoominaan hojjatera.
Mormii yeroo amma eenyuu qopheesse kan jedhuuf ABOfi qeerroo Bilisumma Oromootu qopheesse. Kaayyoon fincila xumura garbummaas qabsoo ilmaan Oromoo gaggeessa jiraan walabumma akka gonfaatanif galmaan ga’uuf kan akeekamedha. Gama birootin rakkoon qabatamaan jiru dhaabbiilleen siyaasa oromoo akka dhunfaatis ta’e akka dhunfaati waan wal hin hubaanneef mormiin adeemsiffama jiru sirrifi sirri miti jechuun uummata dogoggorsuu irratti agamama jira. Kun hubannoo dhabbinsiidha anaan yoo oganamee malee qabsoon galma akeekame ga’u hin danda’uu jechuun aduunya qabsoo keessa hin jiru. Yeroo wal hubannoo wal giddutti dhabnuu dinni ilmaan oromoo daranaa akka nu garboonfatuus dagachu hin qabnu. Ummatni Oromoo Fincila Xumura Gabrummaa finiinsaa jirutti haalaan jabaachuu qaba. Tumsii alaafi keessaan jiruus kaayyoo uummata kan galmaan ga’u yoo ta’e jabeeffamu qaba”.
Author AbdisaPosted on October 17, 2017 Leave a comment on Fincila Xumura Garbummaa Eenyuun Qopheesse kan Jedhuufi Akeekni qabsoo kana maalii?
Author AbdisaPosted on September 9, 2017 September 9, 2017 Leave a comment on The missing part of the OLF story
WBON ZOONII KIBBAA JIRAA LAATA?
By Habtamu Tesfaye Gemechu.
Iyyaafannaa WBO zoonii kibbaa marsaa duraa!!
akkuma mata duree kootirratti isiniif kaase WBOn zoonii kibbaa hin jiru erga wayyaanen aangoo qabattee kaasee oduun SBOn balaaballeessaa ture soba tarkaanffii cululuqaa fi wareegni kaffalamaa jiru hin jiru,akkasuma gonkumaa WBOn gama kibbaa kanaan rasaasa tokko diinatti dhukaasee hin beeku oduun jettu baay’attee amma dhugaa fakkaachaa waan jirtuuf dhugumaa laata warra naan jettaniif deebiin koo kunooti. obsaan dubbisaa.ragaalee isiniif kaawus qaaman dadhabdan bilbilaan soqaa irra gahaa.
_Warra qaaman daqxanii qulqulleeffachuu barbaadaniifis karaa ittiin dhaqxan akka isin hin rakkifne shaashamanneedhaa kaasee maagalota ijoo fi ummata imala keessanitti isinitti dhufun isin barsiisaa zoonii kibbaatin isin baasaa beeenaaaa..
dubaayi oromiyaa jechuuni dandeessu shaashamannee baay’ee bareeddu fi guddu gala daladalaati shaashen daandii kallattii jahaan naannoo birootii ishee seenu kan qabdu shaashen magaalaa hawwattuudha. Yoo gara zoonii kibbaa deemuu feetan konkolaataa Moyaalee isin geessu yaabbachuun keessan dirqama yoo keessan qabaattanis gaaridha.akkuma imala keessan shaashamanneedhaa daandii Magaala guddiittii Ummatoota kibbaa akkasumas magaala guddittii godina sidaamaa(sidaamoo) geessu qabattanii adeemtan km muraas booda magaalaa dangaa oromiyaa fi ummattoota kibbaa Bishaan gurrachaa geessu bishaan gurracha fi Hawaasaa dildilatu addaan qooda gamni Hawaasa gamannimmoo B/gurraacha hawaasaa keessa shaashaa jechuu hoo feetan bareedina himamee hin dhumneefi hara Hawaasaa qabdiiti mirga keessani.Hawaasadha akkuma baataniin magalaa Tuulaa jedhamtu aragattu isheenis akkuma Galaanif finfinnee walirraa hiixatanis garuu hawaasaa jalatti bulti,Tuulaa dabartanii yoo imala keessan itti fuftan magaalota xixiqqoo godina Sidaamoo jalatti bulan argaat gara magaalaa Yirgaalam (Abboostoo)geessu abboostoo akkuma keessaa baataniin keellaa ykn gumrukaa wayyaanee argitu keellaan kun keellaa hamaa fi sakata’iinsi cimaan konkolaatotaafi imaltoota gara Moyaaletii dhufu irratti godhamuudha.keellarratti asii gadi yoo deemtan sakata’iinsi darbee darbee malee hin jiru.akkuma xiqqoo keellaa bira dabartaniin karaan iddoo lamatti addaan gora tokko kan warra Gujii garjaa biyya warqeef dammaa biyya waaqni dhihoo nama geessu yoo ta’u asiinis zoonii kibbaa gahuun ni danda’ama.karaan lammataammoo qajeeluma karaa moyaalee nu geessu waan ta’eef nuti isarra jirra karaa keynarra otuma imalluu magaalaa warra sidaamaa(moo)cuukkoo geeyna maqaan ishee anaafis gaaffidha akkamitti akka maqaa ynaata oromoo jaallatamaadhan moggaafamte?garuu magaalattiin magaalaa baadiyyaa taatus jimaan hawaasa fi shaashamannee akkasuma Dodolaa, Adabbaa hanga Baalee roobee deemu dabalataan Adaamaa fi finfinnee dabalatee kan wal gahu naannoo kanaa burqa balacee,caangee,siqqee fi kkf asi maddisaanii asi.ergan cuukkodhaan hangana wal sin barsiisee imala keessan keessatti magaalan itti aantu magaalaa guddittii godina Geedi’oo Diillada Diillan magaalaa bareeddu fi lafa tabbaarratti argamtuutudha hoteelonni ishee babbareedo fi turiistootaf kan tolaniidha imalaan shaashedhaa ganama sa’aatii12:00tti ka’e akkuma saffisa konkolaataatti sa’aatii 4:00_5:30 tti diillaa ni gaha. Kanaafuu diillan magaalaa cireen itti ynaatamu ta’uusheeti.imalaan diillatti ciree ynaatee imala isaa eegalu ammas godinuma Geedi’oo keessa magaalaa Gowangaa,fissahaa gannat,yirgaa caffee fi gadab faa jedhaman darbeet Naannoo ummattoota kibbaa keessaa baha. magaalaa gadab akkuma darbeen oromiyaatti deebi’a gaafa oromiyaa Arsii lixaa bishaan gurraachatti irraa bahe Gujiidhan itti deebi’a imala xiqqoo boodas magaalaa baadiyyaa Garbaa jedhamtutti dhufa Garbaa qaxxaamuuruun km muraasa booda magaalaa Bullee horraa gaha.magaalaa tana magaalota maqaan kiristinnaa laatameef keessaa ishee tokko yoo taatu maqaan kiristinnaa ishees(Hagera Maariyaam)jedhamti.imalaan shaashedhaa ka’e yoo bullee horraa gahu akkuma saffisa konkolaatatti sa’aatii 8:30_10:00 gaha asitti konkolaatonni shaayidhaaf jedhanii waan dhabbattaniif magaalaa foolii oromoo qabduu fi magaalota akkasii keessatti ummanni 87%afaan oromootin walii gala jettanii otuu hin yaadin argitu hunduumtuu afaan orimootin walii gala walitti gurgura walirraa bita.walumaa galatti magaalattiin oromummaa calaqiisiisfti akka magaalota giddu galaa oromiyaa hedduu afaan amaaraa haasawuun hin jiru.
Imalaan WBO zoonii kibbaa soquu imalarra jiru yoo waan ijaan argu soquu baate asumaahuu ragaa gahaa waliin deebii quubsaa ni argata.
Mooyaalee gahuudhaaf amma km 300tu nu hafa….
Itti fufa….share it…
Author AbdisaPosted on August 30, 2017 Leave a comment on WBON ZOONII KIBBAA JIRAA LAATA?
Abdisa Create a free website or blog at WordPress.com.